လက်ဝါးကားတိုင်ဖျက်ဆီးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Christianity » လက်ဝါးကားတိုင်ဖျက်ဆီးခြင်း
Posted by Good Idea on Aug 20, 2010 in Christianity |0comments
မင်းတပ်မြို့အေးချမ်းသာယာရေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်တည်ဆဲဥပဒေအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းအရ၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အား/ကာအရာရှိဦးရွှေအွမ်၊ သစ်တောဌာနမှဦးသန်းမြင့်၊နတ်မတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှ ဦးဟုန်းမန်၊ မြေစာရင်းဌာနမှ ဦးထန်းမောင်၊ ရဲတပ်ကြပ်ဦးနိုင်းထန်း တို့သည် မိုးကြိုးဝိုင်းသစ်တောထိန်းဧရိယာ၊ နယ်မြေခံလူထု၏ ၀မ်းစာအတွက် လုပ်ကွက်ဧရိယာ၊ နွားနောက်စားကျက်မြေဧရိယာ သတ်မှတ်ရန်နှင့် ဆုတောင်းဥယျာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုရန် (၂၀)ဧကခန့်မြေကို သက်ဆိုင်ရာ ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ သတ်မှတ် ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာအဖြစ် သစ်ပင်ခုတ်လှဲခြင်း၊ သစ်ခွပန်းခူးခြင်း၊ သားငှက်တိရိစ္ဆာန်များ သတ်ဖြတ်ခြင်းမှထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အစိုးရတရားဝင် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် ဆုတောင်းဥယျာဉ်ပိုင်နက်အတွင်း အမြင့် (၂၃)ပေ၊ အနံ (၃)ပေ၊ ထုထည် (၁)ပေရှိသည့် လက်ဝါးကားတိုင်တည်ထား ကိုးကွယ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုပါ အာဏာပိုင်အစိုးရမှ တရားဝင်စာထုတ် ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ အာဏာပိုင်အစိုးရမှ ( ၁. ၂. ၂၀၀၉ ) ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ကွင်းဆင်းအတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုဆုတောင်းဥယျာဉ်နေရာသည် မင်းတပ်မြို့နယ် ၊ မကွီအုပ်စု၊ ချောက်ရိုးကျေးရွာအထက်ဖြစ်ပြီး ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နယ်မြေခံပုဂ္ဂိုလ်များမှ နတ်ပူဇော် ပသခြင်းဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးထွန်းကားလာရာ တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတောင်းဥယျာဉ် အဖြစ် အသုံးပြု ပြောင်းလဲ လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းဆုတောင်းဥယျာဉ်သည် မင်းတပ်-မတူပီကားလမ်း ၂၄ မိုင် ၅ ဖာလုံ အထက် တောင်ကတုံးနေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။
မင်းတပ်မြို့ခရိုင်သာသနာဦးစီးမှူး တောင်တန်းသာသနာပြု(အရှေ့ဘုန်းကြီးကျောင်း)မှ ဘုန်းကြီးနှင့် မင်းတပ်မြို့သား ဦးလောကီးတို့ဦးဆောင်ကာ ၊ ခ.ယ.က ဥက္ကဌ ၊ ခ.ယ.က အတွင်းရေးမှူး ၊ မ.ယ.က ဥက္ကဌ ၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ၊ မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိ ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီး ၊မြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲမှူး ၊ ခရိုင်သာသနာရေးဦးစီးမှူး ၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးတို့အား အစည်းအဝေးခေါ်ယူလျက် လက်ဝါးကားတိုင်ကို ကမကထ တည်ဆောက်သူ ဦးထန်းနိုင် ၊ ဦးဘွေယောတို့အား အကြပ်ကိုင် ဖိအားပေးကာ (၂၄.၇.၂၀၁၀) နောက်ဆုံးနေ့ထား၍ လက်ဝါးကားတိုင်ကို ၄င်းတို့၏ ရှေ့မှောက်၌ တိုင်အား ချိန်းကြိုးများဖြင့်ဆွဲယူဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ထိုလက်ဝါးကားတိုင်ကို(၇.၄.၂၀၀၈) ခုနှစ်ကပင် သစ်သားလက်ဝါးကပ်တိုင် ၊ ထိုမှတဆင့် အင်္ဂတေဖြင့် အရှည် (၂၃)ပေ ၊ အနံ (၃)ပေ ၊ ထုထည် (၁)ပေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို ထိုစဉ်ကတည်းကပင် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလက်ဝါးကားတိုင်ကို (၂၄.၇.၂၀၁၀) တွင် အစိုးရမှ ဖြိုလဲဖျက်ဆီး လေတော့သည်။